2018 APAN Star ပွဲမှာ ဆုကိုယ်စီသိမ်းပိုက်ခဲ့ကြတဲ့ နာမည်ကျော်အနုပညာရှင်များ – Trend.com.mm
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့  “Winners of the 2018 APAN Star Awards” ဆုပေးပွဲကြီးကို အောက်တိုဘာ ၁၃ရက်နေ့က Kyunghee တက္ကသိုလ်မှာကျင်းပခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီပွဲကြီးအတွက် Kim Seung Woo က အခမ်းအနားမှူးအဖြစ်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါတယ်။
ဒီဆုပေးပွဲမှာ တစ်နှစ်တာအကောင်းဆုံးဒရာမာဆု “Drama of the Year”ဆုကို “Mr.Sunshine”ဇာတ်ကားကရရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီကားထဲမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ မင်းသားချော Lee Byung Hun က Daesang (Grand Prize)ဆုရရှိခဲ့ပါတယ်တဲ့။Mr.Sunshine ထဲမှာပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ မင်းသမီး Kim Tae Ri ကလည်း အကောင်းဆုံးမင်းသမီးအဖြစ် Best New Actress ဆုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။
နှုတ်ခမ်းနီမလေးတွေအသည်းစွဲ”What’s Wrong With Secretary Kim?”မင်းသား Park Seo Joon နဲ့ “My Ahjussi” မင်းသမီး IU တို့က Top ExcellenceAward ဆုကိုယ်စီရရှိခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။Excellence Award ဆုနဲ့ K-star Award (Most Popular) ဆုကိုတော့ အမျိုးသားထဲမှာဆို မင်းသား Jung Hae In (Pretty Noona Who Buys Me Food) က ဆွတ်ခူးသွားခဲ့ပြီး အမျိုးသမီးထဲမှာတော့ မင်းသမီးPark Min Young (What’s Wrong with Secretary Kim?)”က Most Popular Actress ဆုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။
Global Star Award ဆုကိုတော့မင်းသားချော Park Hae Jin က ရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။Congratulations all!
တောငျကိုရီးယားနိုငျငံရဲ့“Winners of the 2018 APAN Star Awards” ဆုပေးပှဲကွီးကို အောကျတိုဘာ ၁၃ရကျနကေ့ Kyunghee တက်ကသိုလျမှာကငျြးပခဲ့တယျလို့သိရပါတယျ။ဒီပှဲကွီးအတှကျ Kim Seung Woo က အခမျးအနားမှူးအဖွဈဆောငျရှကျပေးခဲ့ပါတယျ။
ဒီဆုပေးပှဲမှာ တဈနှဈတာအကောငျးဆုံးဒရာမာဆု “Drama of the Year”ဆုကို “Mr.Sunshine”ဇာတျကားကရရှိသှားခဲ့ပါတယျ။ဒီကားထဲမှာ ပါဝငျသရုပျဆောငျခဲ့တဲ့ မငျးသားခြော Lee Byung Hun က Daesang (Grand Prize)ဆုရရှိခဲ့ပါတယျတဲ့။Mr.Sunshine ထဲမှာပါဝငျသရုပျဆောငျခဲ့တဲ့ မငျးသမီး Kim Tae Ri ကလညျး အကောငျးဆုံးမငျးသမီးအဖွဈ Best New Actress ဆုကိုရရှိခဲ့ပါတယျ။
နှုတျခမျးနီမလေးတှအေသညျးစှဲ”What’s Wrong With Secretary Kim?”မငျးသား Park Seo Joon နဲ့ “My Ahjussi” မငျးသမီး IU တို့က Top ExcellenceAward ဆုကိုယျစီရရှိခဲ့ကွတယျလို့သိရပါတယျ။Excellence Award ဆုနဲ့ K-star Award (Most Popular) ဆုကိုတော့ အမြိုးသားထဲမှာဆို မငျးသား Jung Hae In (Pretty Noona Who Buys Me Food) က ဆှတျခူးသှားခဲ့ပွီး အမြိုးသမီးထဲမှာတော့ မငျးသမီးPark Min Young (What’s Wrong with Secretary Kim?”က Most Popular Actress ဆုကိုရရှိခဲ့ပါတယျ။
Global Star Award ဆုကိုတော့မငျးသားခြော Park Hae Jin က ရရှိခဲ့တယျလို့သိရပါတယျ။Congratulations all!